फेसबुकमा फेक न्युज पोष्ट गर्दै हुनुहुन्छ ? सावधान ! एकाउन्ट नै डिलिट हुन सक्छ
HOME » फेसबुकमा फेक न्युज पोष्ट गर्दै हुनुहुन्छ ? सावधान ! एकाउन्ट नै डिलिट हुन सक्छ
डिसी नेपाल , २७ बैशाख २०७४
विश्व चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले अब फेक न्युज पोष्ट गर्ने एकाउन्टहरुलाई निगरानीमा राख्न थालेको छ ।
फेसबुकले फेक न्युज पोष्ट गर्ने दशौँ हजार एकाउन्टलाई रद्द गरेको जनाएको छ । बिशेषगरि चुनावको समयमा हुने गलत समाचार तथा फेक एकाउन्टबाट हुने नराम्रा पोष्टहरुको कारण सामाजिक सञ्जालका दुरुपयोग पनि हुने गरेको छ । ब्रिटेनमा आगामी जुनमा हुन लागेको आमचुनावलाई लक्षित गरेर फेक न्युज पोष्ट गर्ने एकाउन्टहरु रद्द भएको जनाइएको हो ।
फेसबुकले ब्रिटेनको पत्रिकामा विज्ञापनमार्फत आफ्ना पोष्टहरु कस्तो शैलीमा लेखिनुपर्ने भन्नेबारे पनि सुझाएको छ । विज्ञापनमा भनिएको छ कि पाठकहरुले पोष्ट भएका समाचारका हेडलाइनहरु धेरै दोधार हुने खालका पाएमा तथा भित्रि समाचारसँग असम्बन्धित हेडलाइनहरु भएको पाइएमा फेसबुकले फेक एकाउन्ट रद्द गर्दै सच्चा समाचारको लागि आफूलाई अघि बढाउन मद्दत मिल्ने जनाएको छ ।
फेसबुकका विभिन्न देश हेर्ने निर्देशकहरुले अहिलेको उद्देश्य फेसबुकको गलत प्रयोग जस्ता समस्याको मूख्य कारण पत्ता लगाई आगामि रणनितिहरु तय गर्ने बताएका छन् । यसरी विभिन्न देशमा चुनावको समयमा हुने गलत प्रचारको लागि फेसबुकको प्रयोग हुन थालेपछि फेसबुक कम्पनिले फेक एकाउन्ट, तथा गलत समाचार पोष्ट गर्ने एकाउन्टहरु रद्द गर्नेसमेतको प्रयासहरु गर्न थालेको हो । एजेन्सि
पुनःनिर्माणका लागि सबैको साझा मत आवश्यक : मन्त्री अधिकारी
किन अवार्डमा जाँदैनन् खगेन्द्र लामिछाने ?
मड्रिड र बायन पहिलो हाफ भिडन्त, १–१ को बराबरी
दुई हप्तामा लिलीबिली र नेप्टेले कति-कति कमाए ?
रुवाबासी भएका नायक रोहित पहिलो पटक हाँस्दै मिडियामा
राजेश हमालको पिटाई खाने डरले माग्ने बूढा भाग्दै
निर्देशक तुलसी घिमिरे र अभिनेता दयाहाङ राई एउटै चलचित्रमा
आयुष्मान र सन्दिप क्षेत्री प्रहरी परिसरमा, के गरे त्यस्तो ?
मड्रिड र बायन भिडन्त, बेल र बेन्जेमा बेन्चमा बस्ने
रेखाको छोरा आभाषको विवाहमा चल्यो रेखाको विवाहको कुरा